Kwenzeka ntoni emva kokwahlula iphepha, iglasi kunye neplastiki? | Oomama Namhlanje
Kwenzeka ntoni emva kokwahlula iphepha, iglasi kunye neplastiki?
UAna L. | 16/05/2021 12:00 | Intsapho
Yonke into oyiphosa kwisitya iyabuya, Iya kuba yileta engalunganga yokuphinda isetyenziswe, ezinye zezi: ukunciphisa, ukusebenzisa kwakhona kunye nokurisayikilisha. Ukuba uyazibuza, okanye abantwana bakho bayakubuza, kwenzeka ntoni emva kokwahlulahlula ikhadibhodi, iplastiki okanye iglasi kwizikhongozeli zabo, siza kukuxelela. Kungenxa yokuba iiplastiki, iibhotile okanye amaphepha ayabuya abenobomi obutsha.
Njengoko siphawulile, Ukuphinda kusetyenziswe kwakhona enye yeentsika zoqoqosho olujikelezayo, kwaye ngomso lusuku lweHlabathi lokurisayikilisha. Kubalulekile ukuba lonke usapho lubandakanyeke kuyo. Ezi zinto sizilahlayo, kwaye sizifaka kwizikhongozeli ezihambelana nazo, ziya kuba zizinto eziluhlaza zezinye izinto. Ke kwiiveki ezininzi siza kuba nazo kwakhona eminwe yethu.
1 Kwenzeka ntoni kwiglasi emva kokugcwalisa isitya esiluhlaza?
2 Iphinda iphinde yenziwe njani ukuba ibe liphepha?
3 Kwaye emva kokwahlulahlula iplastiki?
Kwenzeka ntoni kwiglasi emva kokugcwalisa isitya esiluhlaza?
Kubaluleke kakhulu ukuba sisebenzise kwakhona iglasi ekhaya, ibhotile enye inokusinceda amatyeli aliqela. Kodwa ukuba asisayiboni iluncedo, kuya kufuneka siyifake kwisitya esiluhlaza. Iglasi ithatha malunga neminyaka engama-5000 ukubola, amangcwaba ase-Egypt anamaqhekeza eglasi apheleleyo afunyenwe! Y iglasi 100% irisayikilishwe.
Xa sifaka iibhotile zethu zeglasi kunye neejagi emgqomeni oluhlaza, zisiwa kumzi-mveliso wokurisayikilisha. Apho into yokuqala abayenzayo kukuyihlamba ngobumdaka kunye nezinye izinto, kwaye bohlule ngombala. Yonke loo nto Ityunyuzwa ukufumana into ebizwa ngokuba yi-calcin, ekrwada ekwakheni ngayo izikhongozeli zeglasi.
Nangona iglasi ingadibani ngokwasemzimbeni okanye ngemichiza nokusingqongileyo, inzuzo yokuphinda isetyenziswe kukuba i-calcine ezinye iibhotile zisetyenzisiwe kwakhona. A) Ewe ithintela ukuba ikhuphe izinto zayo eziphambili kwindalo, ezizezi: isanti yesanti, i-sodium carbonate kunye nelitye lekalika. Kufuneka sikhumbule ukuba ingqayi yeglasi akufuneki ilahlwe.
Iphinda iphinde yenziwe njani ukuba ibe liphepha?
El iphepha linokuphinda lisetyenziswe kwakhona ukuya kumaxesha asixhenxeOku kubizwa ngokuba bubomi obuluncedo, kuba ixesha ngalinye iipropathi zefayibha ezilahlekileyo zilahlekile kancinci. ESpain, unyaka nonyaka, iitoni ezi-4 zamaphepha ziphinda zisetyenziswe, kodwa kufuneka sisebenzise kwakhona, kuba ngaloo ndlela kuya kugcinwa neminye imithi.
El Ikhadibhodi kunye nephepha aliqokelelwa kuphela kwisikhongozeli esiluhlaza, kodwa nakwiivenkile zesebe okanye amaziko emizi-mveliso ayise kwiindawo zokurisayikilisha. Xa sifaka ikhadibhodi kwisitya bayakuhlulahlula, bacinezelwa kwiibhali ezinobungakanani obumiselweyo kunye nobunzima. Eli phepha liza kuhlulwa ngokohlobo lwalo, iphephandaba alifani nelo lamaphephancwadi.
Emva kokuhlela ngokweendidi zamaphepha, zisiwa kumzi-mveliso apho ziya kuguqulwa zenze i-cellulose pulp. Le pulp inokwenziwa ngqo kwindawo yokuzahlula. Ngale pulp, intlama iya kuveliswa, eyomiswa kwaye isongelwe emaphepheni amakhulu, aya kuthi kwakhona abe iibhokisi zezihlangu, ukutya okuziinkozo, iincwadi, amaphephandaba ...
Kwaye emva kokwahlulahlula iplastiki?
Kwimeko yesikhongozeli esimthubi, enye yeplastiki, kufuneka kuqala iibhotile zeplastiki ezahlukileyo, umzekelo, kwezinye izinto zokupakisha ezifana neenkonkxa zealuminium okanye itetrabriks, eziya kwisitya esinye. Iitetrabriks zezona zinzima kakhulu ukwahlulahlula kuba zinamaphepha, i-polyethylene kunye nealuminium, kwaye iinkonkxa zinokuphinda zisetyenziswe kwakhona ngokungenamda!
Inkunkuma ihlelwa ngokobunzima nobungakanani bayo, Enkosi kwitape emagneti, izikhongozeli ezineentsimbi zahluliwe, ezinje ngeenkonkxa kunye nezo zingenazo. Ngqongqo Ukuthetha ngeplastiki, emva kokuyifaka kwisikhongozeli ukuphinda kusetyenziswe kwakhona kuhamba ngamanyathelo ama-4Inkunkuma ityunyuzwa ibe ngamaqhekeza amancinci athi emva koko ahlanjwe, afakwe iisentimitha kwaye omiswe ukuze acoceke. Ngoomatshini bokushicilela, inkqubo ye-extrusion yenziwa apho iplastiki ithatha imilo ekujongwe ukuba iyifumane.
Kubalulekile ukuba uyazi, kwaye uyidlulisele ebantwaneni bakho, ukuba yonke inkunkuma engenakho ukuphinda iphinde isetyenziswe, yiya kwiindawo zokugcina iimpahla, kwindawo yokulahla inkunkuma, okanye kwizityalo ezivelisa amandla. Ke ngoku uyazi, ukuphinda usebenzise kwakhona, hayi ingomso kuphela, kodwa yonke imihla! Apha Sishiya amanye amaqhinga okwenza oko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Oomama Namhlanje » Intsapho » Kwenzeka ntoni emva kokwahlula iphepha, iglasi kunye neplastiki?
Usana lwam lumthubi
3 ubugcisa beenkwenkwezi kubantwana